राज्यद्धारा विभेदित साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७६ भदौ ३१ गते २२:०४
कुरो बढुवामा मात्र नभई स्थायी तहमा कार्यरत शिक्षक र तिनका प्रतिनिधिका कारण उच्च माध्यामिक तहका शिक्षकहरुको वास्तविक समस्या शुनुवाई हुन नसकेको हो । निति नियम बनाउने ठाउँमा उनीहरुकै कुरा पुग्छ जबकी राज्यले त हामीलाई शिक्षक नै मान्न सकेको छैन । अनि कसले पुराईदियोस त्यहासम्म हाम्रा कुरा । अनि कुरा हामी भित्रै । जो हाम्रा प्रतिनिधि बनेका छन ती त बाघका छाला ओढेका स्यालहरु हुन । कहाँबाट बोल्छन हाम्रा लागि उनीहरुले । कारण हिस्टुनमा हालिमुहालि प्रतिनिधि स्थाई तल्लो तहका शिक्षकहरु । उदाहरणको रुपमा कुनै जिल्लामा हिस्टुनका अध्यक्ष माध्यामिक स्थाई तृतिय । उनीहरुको चिन्ता बढुवामा भन्दापनि प्रअमा हो जस्तो लाग्छ यदि माध्यामिक द्वितियमा साविकको उच्च माध्यमिक कायम रहदा । तसर्थ नारा चै दिन्छन हामीलाई माध्यमिक द्वितियामा विज्ञापन गरियो भने उनीहरुको जीवनभर बढुवा रोकिन्छ रे । कुरो त्यो होइन पदको हो । प्रअ जीवनभर नपाइने हो की भन्ने हो । बढुवाको लागि त साविकको पद संख्या अनुपातमा वृद्धि गर्दा समस्या नै रहन्न । यहि विभेदकारी कुरालाई साथ दिँदै शिक्षक सेवा आयोगले लाइसेन्सको विज्ञापन गरेको छ – साविक उच्च माध्यमिक शिक्षकहरुको लागि । विज्ञापन नम्बर चै अलग रे अनि पाठ्क्रम चै खै के खै के ! उच्च माध्यामिक शिक्षक हुन स्नातकोत्तर दितिय श्रेणीमा उर्तिण हुनुपर्ने प्रावधानमा कार्यरत शिक्षकलाई माध्यामिक स्नातक उर्तिणको सरह पाठ्यक्रम र सोही सरहको विभेदको शुरुवात यहिबाट भयो ।
लाइसेन्स कहिले अस्थाइ रे अबे स्थाई रे ! लिए नि हुने रे ! अनेक नाटक, किन दिइयो अस्थाई ! अरु तहको अस्थाई लाइसेन्सलाई कसरी बनाइयो स्थाई ? के त्यो नजिर हामीलाई थाहा छैन र ? यसभन्दा अघि अन्य तहका अन्य शिक्षकहरुलाई कसरी गरियो स्थाई ? त्यो नजिर आँखा हुनेले प्रष्टै देखेको छ ।